Filankevitry ny minisitra tany Toliara : « Fitondram-panjakana manakaiky ny vahoaka » -
AccueilRaharaham-pirenenaFilankevitry ny minisitra tany Toliara : « Fitondram-panjakana manakaiky ny vahoaka »
Filankevitry ny minisitra tany Toliara : « Fitondram-panjakana manakaiky ny vahoaka »
22/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Raha nanontaniana mikasika ny fanatanterahana ny Filankevitry ny minisitra mitety Faritra ny Filoha Hery Rajaonariampianina dia nanambara ny tenany fa Fitondram-panjakana manakaiky ny vahoaka no ilaina. Fitondram-panjakana mihaino ny vahoaka, manatanteraka ny faniriana na/sy fangatahan’ny vahoaka ary manompo ny vahoaka…
Araka izany, nohazavain’ny Filoham-pirenena hatrany fa rehefa mitety Faritra toy iny tany Toliara iny ny Filankevitry ny minisitra dia ny mahakasika an’ilay faritra anatanterahana izany ny lahadinika atao. Izany hoe, nifototra tamin’ny fampandrosoana ny Faritra Atsimo Andrefana, Ihorombe, Anosy, sns, ny dinika nifanaovana tamin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta notarihin’ny praiministra.
Voalaza ihany koa fa miompana indrindra amin’ny fampandrosoana ara-toekarena izay takian’ilay faritra hisian’ny fivoriana ny lahadinika. Mampiavaka azy amin’ny mahazatra, hoy ny Filoha, ny fijerena manokana ireo fotodrafitrasam-pampandrosoana maharitra ho an’ ilay Faritra, toy ny eo amin’ny lafiny fambolena sy famokarana, ny fizahantany, ny fahasalamam-bahoaka, ny fampianarana, ny mahakasika manokana ny jiro sy ny rano, sns.
Anisany hiompanan’ny lahadinika ihany koa ny mikasika ny asa amin’ny ankapobeny sy ny fampananan’asa eny anivon’ny faritra mba hisian’ny fampandrosoana haingana, sns.
Noho izay indrindra, maro ireo toromarika nomen’ny Filoham-pirenena ireo minisitra tsirairay amin’ny fampandrosoana ny Faritra.
Marihina fa voaasa hanatrika iny Filankevitry ny minisitra iny avokoa ireo Lehiben’ny Faritra, ireo Sefo Distrika ary ireo Ben’ny tanàna. Naharitra ora ny dinika nifanaovana tamin’izany.
Andry Rajoelina : Manao Kopi-Kolé ny Fisandratana 2030
Foto-kevitry ny Fisandratana 2030 nampahafantarin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha tamin’ny 25 janoary 2018 ny fanandratana ity firenena ity ho tsara kokoa noho izao. « Ampy izay ny fampahantrana ny Malagasy, ka andao hasandratra ny ...Tohiny
Basikety – Kianjan’Andraisoro : Horaisin’i Mbola Rajaonah ny fanamboarana ny kianjan’Andraisoro
Andranomena : Zanaka karana nalaina an-keriny